हावाहुरीसँगै आगलागीको क्रम बढ्दो, आगलागी हुन नदिन के गर्ने ? | OB Media
हावाहुरीसँगै आगलागीको क्रम बढ्दो, आगलागी हुन नदिन के गर्ने ?
Our Biratnagar | ९ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०६:०७
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । हरेक वर्षजस्तै चैत सुरु भएपछि आगलागीका घटना बढ्न थालेका छन् । हाम्रो आफ्नै लापरवाहीका कारण आगलागीका घटना धेरै हुने गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा हेर्ने हो भने विद्युतका लाइन जथाभावी घरमा जोडिएका छन् । यसरी अव्यवस्थित रुपमा विद्युत जडान गरिएको ठाउँमा जुनसुकै बेलामा पनि विद्युत लाईन सर्ट हुन सक्छ र यसले ठूलो क्षति निम्तिन सक्छ ।
जुद्द वारुणयन्त्रका पूर्व प्रमुख लिलाराज गाछाले फागुन, चैतको महिनामा बढी नै आगलागीका घटनाहरु हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिले उपत्यकामा लोडसेडिङ हुँदा आगलागी हुने गरेको थियो । छिनमै बत्ती आउने, छिनमै जाने हुँदा विद्युत सर्ट हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।’
बत्ती गएपछि हामीले विद्युतीय उपकरण बन्द गर्ने गर्नुपर्छ । साथै विद्युतीय उपकरणहरु चलाउँदा ध्यान दिनुपर्छ । यो समयमा जंगलका छेउछाउमा फोहोर जलाउँदा पनि आगो लाग्ने सम्भावना बढी हुने गरेको छ । चुरोट खाएर ठूटा फाल्दा, सलाईका काँटी फाल्दा पनि आगो लाग्ने गरेको छ ।
सामान्यतया ग्रामीण भू–भागका वन जंगलमा घाँसपात राम्रो पलाओस् भनेर पनि जंगलमा आगो लगाउने गरिन्छ । यसरी जंगलमा आगो लगाउँदा कहिलेकाहीँ जंगल छेउका बस्तीहरु पनि जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।
शहरी क्षेत्रमा आगो लाग्दा धेरै क्षति हुने गरेको छ । उपत्यकामा भएको बाक्लो र घना वस्तीका कारण पनि यहाँ एक ठाउँमा आगो लाग्यो भने आगो निभाउन समस्या देखिन्छ । बाक्लो बस्ती भएका कारण सबै बाटोमा दमकल पनि जान सक्दैन । उपत्यकाको अस्तव्यस्त शहरीकरणको कारण ट्रफिक जामले पनि उचित समयमा घटनास्थलमा पुग्न गाह्रो हुन्छ ।
बारुणयन्त्रका पूर्व प्रमुख गाछाले आफ्नो ४ वर्षको कामको अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो, ‘उपत्यकामा आगो लागिहाल्दा छिटो निभाउन नसक्नुको कारण यहाँको बाटो र जोडिएर बनेका घरहरु नै हो ।’ हामीले विकास गर्दा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई पनि ध्यान दिएर भौतिक संरचना बनाउनुपर्छ ।
७५ रुपौयाँ पर्ने स्लाईनलाई ४ सय लिने कर्मचारीलाई कार्वाही गर्न मन्त्री घिमिरेको निर्देशन
विराटनगरमा वाढी पिडीत राहतमा गडबड, १६ नम्बर वडा कार्यालयमा तालाबन्दी (भिडियो सहित)